Dib u Eegid Cimilada ah: Adeegga Kaydinta Sawirada "Awesome Screen Screening"
Web2DB waa sawir aad u awood badan oo faa'iido leh oo wax ku ool ah. Wuxuu u shaqeeyaa sida aasaasaha xoghayaha oo wuxuu noo ogol yahay in aan macluumaadka boggaga internetka si sahlan u dhaqmo. Tani barta shabakadda waxay ururisaa macluumaadka aan nidaamsanayn ee bogagga shabakadaha iyo boggaga internetka waxayna abaabushaa oo u habeeyaan si habboon. Waa inaad sheegtaa waxaad rabto inaad raadiso iyo sida aad rabto in aad qaabeyso xogtaada, iyo Web2DB waxay ku qabanayaan hawshooda sida ku qoran tilmaamaha. Xogta waxaa lagu keydsan karaa MySQL, CSV, Access iyo Excel qaababka. Web2DB waxay leedahay sifooyin fara badan oo ka dhigaya xulashada ugu fiican ee webmasiga, ganacsatada, ganacsatada, barnaamijyada, iyo calaamadaha. Qaar ka mid ah sifooyinka muuqda ayaa lagu falanqeynayaa hoos.
1. Sida Tifatiraha Mashruuca:
Web2DB waxay u dhaqmaan sidii tifaftiri mashruuc awood leh iyo mid cajiib ah. Naqshadeynta shabakadda webka mashruuc ma fududa ilaa aad ka hesho xirfadaha barnaamijka ku filan. Laakiin Web2DB, uma baahnid inaad noqoto barnaamijka xirfadlaha ah ama codka maxaa yeelay waxaad qaban kartaa shaqooyinkaaga iyagoon lahayn. Qalabkani wuxuu soo uruurin doonaa, isbedeli doonaa, miino saarayaa ama soo saarayaa xogtaada. Waxaa intaa dheer, waxay ku caawinaysaa samaynta qaabab kala duwan oo u shaqeeya xitaa marka xayeysiiska boggu isbedelay. Dhammaan mashaariicda wax laga beddelayo iyo mashruucyada la saaro waxaa lagu dhammeeyaa kaliya dhowr jeer.
2. Si fudud u Qaadista Dhammaan Qaabdhismeedka Maqaalka:
Waad isku dari kartaa Web2DB si aad u soo dejiso bogga intarnetka ama qaar ka mid ah boggooda. Waxay si fudud u qabataa dhismaha oo dhan, iyada oo siisa foomka quruxda badan. Waxaad isku rogi kartaa bogagga shabakadaha yar yar ama bogga oo dhan oo ku saleysan shuruudahaaga, laakiin tayada content ma aha mid wax laga bartay. Qalabkani wuxuu ku haboon yahay goobo waaweyn sida Amazon, eBay, PayPal, iyo kuwo kale. Web2DB waxay leedahay sifooyin heer sare ah waxayna naga caawineysaa in aan sare u qaadno waxqabadka shabakadda. Waa qalab lagu kalsoon yahay oo dhamaystiran.
3. Soo Gudbi Foomamka Foomamka:
Isticmaalka Web2DB, waxaad soo gudbin kartaa foomamka webka gaar ahaan foomamka raadinta iyo foomamka tigidhka internetka iyadoon wax arrin ah. Foomamka waxaa loo gudbin karaa dhamaan qiimaha la soo-jeediyey, waxaana la soo saaray xogta laga helo qaabka CSV. Waxa kale oo aad abuuri kartaa xog ku-saleysan erey-ku-saleysan adigoo adeegsanaya barnaamijkan iyo soo-geli goobtaada si aad u raadiso makiinadaha si aad u sii fiicnaansho iyo dib-u-raadin.
4. Fure Websaytka 'Dynamic Websites':
Muuqaal kale oo muuqaal ah ee Web2DB waa in ay la tacaali karto shabakadaha aasaasiga ah iyo kuwa firfircoonba. Badanaa barnaamijyadii burburinta asaasiga ahaa kama soo saari karaan waxyaabaha laga akhrisan karo bogagga internetka ee firfircoon. Xitaa khaanadaha warshadaha ee xirfadlayaasha ah waxay soo saari doonaan xogta ka soo baxa bogagga shabakada AJAX, laakiin Web2DB waxay kuu fududeyneysaa inaad ka qaadato xogta goobaha firfircoon. Waa inaad maskaxda ku haysaa in macluumaadka goobaha AJAX 'ay qaadan doonaan wakhti si loo soo saaro.
5. Taageerada noocyada kala duwan:
Web2DB waxay dhigi karaan xogtaada la soo saaray Excel, Oracle, OleDB, MySQL, CSV, XML, iyo Excel. Waxaad sidoo kale isticmaali kartaa qoraallada dhoofinta si ay u habeeyaan dhoofinta xogta haddii aad leedahay xirfadaha barnaamijka aasaasiga ah. Web2DB waxay u gudbin kartaa macluumaadka Excel 2003 iyo Excel 2007 sidoo kale waxay kaa caawineysaa inaad ku dhejiso sawirada xogtaada oo dhan. Qalabkani wuxuu kaloo bixiyaa spam ilaalin, hubinta badbaadadaada iyo asturnaantaada internetka Source .